မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား - ဝီကီပီးဒီးယား
(မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်သုံးစွဲသည့် MRTV တံဆိပ်အသစ်
၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၄၆ (၁၉၄၆-၀၂-၁၅) (ရေဒီယို)
ဇွန် ၁၉၇၉ (ရုပ်သံလိုင်း)
Channel 1 (MRTV HD)
Channel2(MRTV Hluttaw)
Channel3(MRTV NRC)
Channel4(MRTV Farmer)
Channel5(MRTV Sport)
Channel 58 (MRTV Sport)
Channel 150 (MRTV)
Channel 158 (MRTV Farmer)
Channel 159 (MRTV Hluttaw)
မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင်ရှိသော နိုင်ငံပိုင် ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် စတင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားအမည်ဖြင့် NTSC စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံပေါင်း (၂၃၁)ရုံ ရှိပြီဖြစ်သည်။
၃ Myanmar International Television
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသံလွှင့်လုပ်ငန်းကို လွတ်လပ်ရေးမရမီ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြီး ၁၉၃၇ ခုနှစ်၌ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာဒုံ (ဝါယာလက်) တွင်စမ်းသပ်အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ယခု ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်ရှိ ဗဟိုကြေးနန်းရုံးကြီး အောက်ထပ်ရှိ အခန်းအချို့ကို အသံလွှင့်ရုံအဖြစ် ဖန်တီးထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဖိုက်ချ်လမ်း (ယခင်ရှမ်းလမ်း၊ ယခုဗဟိုလမ်း)ရှိ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန မူလတန်းကြိုကျောင်း၊ အမှတ်(၄)နှစ်ထပ်တိုက် (လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး) မှ အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ ဖိုက်ချ်လမ်း (ယခုအခေါ် ဗဟိုလမ်း) အသံလွှင့်ရုံထက် နေရာပိုမိုကျယ်ဝန်းသော ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းရှိ ချင်းချောင်းနန်းတော်နေရာ (အနုပညာဦးစီးဌာနရုံး အဆောက်အအုံပရဝုဏ်) သို့ ရွှေ့ပြောင်းအသံလွှင့်ခဲ့သည်။ အသံလွှင့်ရုံအမည်ကို All Burma Broadcasting Station (ခေါ်) ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အသံလွှင့်ဌာန ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လဆန်းမှ မေလဆန်းအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ပတ်လမ်း (ယခုနတ်မောက်လမ်း) ရှိ အဆောက်အအုံနေရာ (ယခုဂျာမနီသံရုံး) နေရာတွင် မြန်မာ့တော်လှန်ရေး တပ်မတော်အသံလွှင့်ဌာန အမည်ဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သော တော်လှန်ရေးရဲဘော်များက လျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ကာ အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာများနှင့် ဟိန္ဒူစတန်နီ ဘာသာများဖြင့် အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မေလဆန်း၌ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတောင်ကြားရပ် လောင်းဝစ္စလမ်း (ယခု အင်းလျားမြိုင်လမ်း) ရှိ နှစ်ထပ်တိုက်ကို အသံလွှင့်ရုံအဖြစ် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အသံလွှင့်ရုံအမည်ကို Rangoon Radio (ခေါ်) ရန်ကုန်ရေဒီယို ဟု အမည်ပေး အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၅) ရက်နေ့တွင် “ရန်ကုန်ရေဒီယို” မှ Burma Broadcasting Service (BBS) (ခေါ်) ဗမာ့အသံ အမည်သို့ နာမည်ပြောင်းလဲ အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၃) ရက်နေ့တွင် လောင်းဝစ္စလမ်း (ယခုအင်းလျားမြိုင်လမ်း) အသံလွှင့်ရုံမှ ဝင်ဒါမီယာကရက်ဆင့် (ယခုပန်းဝါလမ်း) အသံလွှင့်ရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ ဝင်ဒါမီယာအသံလွှင့်ရုံဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၂၈)ရက်နေ့တွင် ဗမာ့အသံ အမည်မှ ပြည်ထောင်စုဖွားတိုင်းရင်းသား အားလုံး၏ ကိုယ်စားပြုရာ မြန်မာ့အသံ အမည်သို့ နာမည်ပြောင်းလဲအသံလွှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့တွင် ဝင်ဒါမီယာ အသံလွှင့်ရုံမှ ပြည်လမ်း “မြန်မာ့အသံ” အသံလွှင့်ရုံသစ်ကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ့အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်အရ အသံလွှင့်ဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးဝန်ရုံး အမည်မှ ပြန်ကြားရေးနှင့် အသံလွှင့်ဦးစီးဌာန အမည်သို့ ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ကာ ပြန်ကြားရေးဌာနခွဲနှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ရောင်စုံရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကို စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ဤဌာနကို ဦးစီးဌာနအဖြစ် သီးခြားဖွဲ့စည်းကာ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့်ဦးစီးဌာန Myanma Television and Radio Department (MTRD) ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံလွှင့်ဦးစီးဌာန အမည်မှ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား Myanma Radio and Television (MRTV) ဟုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
၂၀ဝ၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၈)ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းရှိ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား အဆောက်အဦးသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား (MRTV) အစီအစဉ်အား ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်လည်းကောင်း၊ MRTV-3 အစီအစဉ်အား ၂၀ဝ၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊MRTV-4 အစီအစဉ်အား ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ MRTV-3 အစီအစဉ်အား အသွင်သဏ္ဌာန်ရော အနှစ်သာရပါပြောင်းလဲ၍ Myanmar International Television (MITV) အစီအစဉ်အဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့မှစ၍ ဂြိုဟ်တုများထပ်မံငှားရမ်းပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း(၂၂၄) နိုင်ငံများသို့ လည်းကောင်း၊ ပိတောက်‌မြေအသံလွှင့် အစီအစဉ်အား ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၆) ရက်မှစတင်၍လည်းကောင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ FM များအား ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီ (၁၇) ရက်နေ့မှ စတင်၍လည်းကောင်း ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိသည်။ 
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်များကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှ စ၍ နေ့စဉ် နံနက် (၀၆:၀၀)မှ တိုးချဲ့ ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသည်။ ပြန်ကြားပေးခြင်း ၆၀%၊ ပညာပေးခြင်း ၂၀%နှင့် ဖျော်ဖြေပေးခြင်း ၂၀% ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိသည်။ ပြန်ကြားပေးခြင်းအနေဖြင့် သတင်းအစီအစဉ်ကို နေ့စဉ်နံနက်(၀၇:၀၀)၊ ည (၂၁:၀၀)နာရီထိ တစ်နာရီခြားတစ်ခါ ထုတ်လွှင့်ပေးပြီး တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းအဖြစ် အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း နေ့လယ်(၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိသည်။ ပညာပေးခြင်းအနေဖြင့် ပညာရေးသင်ခန်းစာပို့ချချက်များ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ပညာပေးအစီအစဉ်များ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးအစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်ပေးလျှက်ရှိပြီး ဖျော်ဖြေပေးခြင်းအနေဖြင့် တေးဂီတအစီအစဉ်များ၊ ဇာတ်/အငြိမ့်၊ မြန်မာရုပ်ရှင်/ဗီဒီယို/ဇာတ်လမ်းများ၊ နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်/ဇာတ်လမ်းတွဲများ ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ မိန့်ခွန်းများ၊ နေ့ထူးနေ့မြတ်များ၊ ဘောလုံးပွဲများကိုလည်း အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် ​စက်တင်ဘာ ၁၅ရက်​​နေ့တွင် DVB-T2 Multi Channel Playout System ဖြင့်စတင်တိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး MRTV, MITV, လွှတ်​တော်ရုပ်သံလိုင်း (Hluttaw Channel), တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရုပ်သံလိုင်း (NRC), ​​တောင်သူလယ်သမားကဏ္ဍရုပ်သံလိုင်း (Farmers Channel), MRTV Sports, မြန်မာ့အသံ​ရေဒီယို စသဖြင့် ရုပ်သံလိုင်း၈လိုင်း ​ရေဒီယို၄လိုင်း တို့ကိုစတင်တိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်​ ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၁၅ရက်​နေ့တွင် ရုပ်သံလိုင်း၁၄လိုင်းအထိတိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ် မတ် ၂၄ရက်တွင် ရုပ်သံလိုင်းသစ် ၅လိုင်းထပ်မံတိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် ရုပ်သံလိုင်း ၁၈လိုင်းအား ထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများမှ မနက်၆နာရီက​နေ ည၁၂နာရီအထိ ထုတ်လွှင့်​​ပေးလျက်ရှိပါသည်။ 
Myanmar International Television[ပြင်ဆင်ရန်]
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မြန်မာအင်တာနေရှင်နယ် ရုပ်သံလိုင်း
မြန်မာအင်တာနေရှင်နယ် ရုပ်သံလိုင်း (mitv) ရုပ်သံလိုင်း သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပကတိအခြေအနေမှန်များ သိရှိစေရန်နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိနေထိုင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လွှင့်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
↑ Kyaw Kyaw Htun and Win Lwin. "Myanmar Country Report". ASEAN Mass Communication Studies and Research Center. Retrieved on 2008-12-24. Archived7November 2012 at the Wayback Machine. မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။7November 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thant Myint-U (2006)။ The River of Lost Footsteps--Histories of Burma။ Farrar, Straus and Giroux။ p. 371။ ISBN 978-0-374-16342-6။
↑ ၃.၀ ၃.၁ MRTV Transmission။ MRTV။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ About MRTV။7June 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ Archived6May 2015 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား&oldid=648307" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။